နိုင်ငံခြားသားများပိုင်တူရကီကုန်အမှတ်တံဆိပ် - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်တူရကီကုန်အမှတ်တံဆိပ်
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, Advertising ကြော်ငြာ (Advertorial), တူရကီ 0
နိုင်ငံခြားသားပိုင် Turkish အမှတ်တံဆိပ်
ကျွန်ုပ်တို့ဆီ - Yıldız Holding သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်အားဂျပန် Ajinomoto သို့ 2016 သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
Cola TURKA - 2015 ကိုÜlkerမှဂျပန် Dydo DRINCO သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
နို့ကို - ပြင်သစ်အုပ်စု Lactalis မှသောက်သည်။
SANA OIL: ၎င်းကိုအင်္ဂလိပ် - ဒတ်ခ်ျလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Unilever သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
LAMLICA GAZOZ: 2015 တွင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Dydo DRINCO သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
DAMLA SU: အခုတော့ကိုကာကိုလာရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်နေပြီ။
Plum Water: Nestléသည် 2006 တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ESKIPAZAR: 2015 ကိုဂျပန် Dydo DRINCO ကုမ္ပဏီသို့ရောင်းချခဲ့သည်။
KOMILI OLIVE OIL: 2017 ကိုအမေရိကန်အခြေစိုက် Koninklijke Bunge BV သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
SAKA SU: 2015 ကိုÜlkerမှ Japan Dydo DRINCO သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
SIRMA ရေ - 2013 ကိုပြင်သစ် Danone ကုမ္ပဏီမှဝယ်ယူခဲ့သည်။
YRSAN - 2013 မှာ Dubaili ဟာ Abraaj Group ဖြစ်လာတယ်။
YUMOŞ: ယူနီလန်နှင့်နယ်သာလန်အခြေစိုက် Unilever Holding တံဆိပ်ဖြစ်လာသည်။
HAYAT SU: ပြင်သစ်သည်ဒန်နွန်သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။
AKMINA: ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Danone သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
YEDİGÜN - အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Pepsi ကုမ္ပဏီပိုင်အမှတ်တံဆိပ်
CITY CONFECTERERY: British Cadburry ကုမ္ပဏီသည်။
FİLİZ FOOD: 2003 ကိုအီတလီ Barilla သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
NUHUN ANKARA Pasta - ၎င်းသည် 2014 ရှိဂျပန် Nisshin Foods နှင့် Marubeni ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
GOLF ICE CREAM - ဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီသို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
UNO - UNO ၏တစ်ဝက်သည်စပိန် Vedanta Equity တွင်ရှိသည်။
NAMET - 2014 သည်ဘာရိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
BANVIT Chicken - 2017 ရှိဘရာဇီး BRF နှင့်ကာတာကာတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာဏာပိုင်များမှရရှိသည်။
CP စံ - ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှရရှိသည်။
OLTAN FOOD - အီတလီကို Ferrero ကဝယ်ခဲ့တယ်။
KEMAL KÜKRER: 2013 ကဂျပန် Ajinomoto ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင်: ဂျပန် Ajinomoto ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
SWALLOW, SEZAİÖMER MADRA သံလွင်ဆီ - ဒါဟာအမေရိကန်တွေပဲ။
FALIM SAKIZ - ဗြိတိသျှ Cadburry ကုမ္ပဏီကိုရောင်းခဲ့တယ်။
PEYMAN အခွံမာသီး: Bridgepoint ကုမ္ပဏီဝယ်ယူခဲ့သည်။
Jelly Confectionery: သည်ဗြိတိသျှကုမ္ပဏီ Cadburry မှပိုင်ဆိုင်သည်။
DINING BASKET: Nevzat Aydınမှတည်ထောင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီအားဂျာမန်ပို့ကုန်သူရဲကောင်းထံရောင်းချခဲ့သည်။
IPEK SHAMPOO: ၎င်းသည်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီL'Oréalမှပိုင်ဆိုင်သည်။
HACI ŞAKİR: အမေရိကန် Colgate ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်။
ACE - အမေရိကန်အခြေစိုက် Procter & Gamble ။
BEBE နိုင် - ဘယ်လ်ဂျီယံကုမ္ပဏီ Ontex နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
MADO - သူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကကာတာလူမျိုးပါ။
TEA OF: ဂျက်ကက်ရတယ်။
Gitti သွားပြီ: eBay က GittiGidiyor ကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီသို့ 2011 ၌ရောင်းချသည်။
TURKCELL: Turkcell ၏အကြီးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာရုရှား Altimo နှင့်ဆွီဒင် TeliaSonera ။
TEB Bank - 2005 ရှိပြင်သစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း BNP Paris မှရရှိသည်။
PROFILO - 1995 ကတည်းက Bosch နှင့် Siemens အိမ်သုံးပစ္စည်းများ။
ATASUN OPTİK: ဒတ်ခ်ျမှဆင်းသက်လာသောနိုင်ငံခြားဆိုင်ခွဲများသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
VIKO: ဂျပန်တွေက Panasonic ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။
BAYMAK Kombi / Geyser - ဒတ်ခ်ျ BDR သည် Thermea ဖြစ်သည်။
SEBA MED: ဂျာမနီ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။
ERKUNT TRACTOR / Ankara နှင့်HİSARLARMAKİNE / Eskişehir: ၎င်းသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ Mahindra ကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။
MNG CARGO: Dubaili MIRAGE CARGO ကို B.V. သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
TEKİN ACAR အလှကုန်: ပြင်သစ် Sephora အလှကုန် Inc. သူမသည်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
OIL ရုံး - ဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ရောင်းချခဲ့သည်။
ရဲ: ဂျပန် Kansai သုတ်ဆေး Co. , Ltd.
EGE TAV: ဂျပန်မှရရှိသည်။
Filli Boya၊ Ulusoy Electric၊ Kamil Koçစသည်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားအမှတ်တံဆိပ်များစွာကိုနိုင်ငံခြားသားများလက်သို့အပ်နှံခဲ့သည်။
"ဒီမြေဆီလွှာငါတို့ဥစ်စာဥယျာဉ်ငါတို့ဖြစ်ပါသည်, ရေငါတို့ဖြစ်ပါတယ်, အမဲသားငါတို့ဖြစ်ပါသည်, နို့ငါတို့သည်, ဂျုံမှုန့်ငါတို့ဖြစ်ပါသည်, ရေနံငါတို့ဖြစ်ပါသည်, ဝါဂွမ်းငါတို့ဖြစ်ပါတယ်, အလုပ်သားများနှင့်အလုပ်သမားငါတို့ဖြစ်ကြပေမယ့်ယောက်ျားငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းများပြေး, ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်း, စျေးနှုန်းခေါက်နှင့်ငါတို့ကိုပြန်ရောင်း။ ။ "
ကုန်တင် Wagon ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များနောက်ဆုံးရနည်းပညာအပေါ်ကိုရွေးချယ်ထားပါသည် 25 / 05 / 2018 ကုန်တင်ကားများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်ကမ္ဘာ့မီးရထားစက်မှုလုပ်ငန်း Solentek များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုတာချောမွေ့နှင့်အရည်အသွေးဖို့အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. စက်ရုပ်ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ဆောင်။ သူတို့စက်ရုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်. ပြုပါမည်ဟုကုမ္ပဏီအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Muammer Abali "ဟုအဆိုပါစက်ရုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူလာမယ့်ကာလ၌မိမိကိုယျကိုမှသုံးပါလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ Solentek, Bursa Nilufer ဖှဲ့စညျးရထားလမ်းစနစ်များနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦအတွက်9200 များ၏အသက်အရွယ်ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာစက်မှုဇုန်၏တထောင်စတုရန်းမီတာအားဖြင့်လိုအပ်သောနှင့်သံမဏိအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအရထားလမ်းစနစ် R & D အလုပ်အပေါ်အထူးအလေးပေး, အသုံးအများဆုံးချို့တဲ့အတူကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံနှင့်ပြောင်းလဲနေသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ ...
TÜDEMSAŞ, တာကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသည့်နေရာအရပ်ရှိပါတယ် 08 / 10 / 2012 တာဝန်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေထံမှTÜDEMSAŞ, အပေါ်စတင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ကြီးဌာန 10 / 05 / 2011 ရက်စွဲများနှင့် 02 တရားဝင်ပြန်တမ်း 10 / 2012 ရေတွက်သည့်အခါ Dursun Selim အဆိုပါရေကြောင်းရေးရာမှအကြံပေးများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမိန့်ထုတ်, TÜDEMSAŞ 28429 / 01 / 10 ၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည် / 2012 နေ့စွဲနှင့်ဤအတူ 2012 / 646 အမိန့်ပို့ဆောင်ရေး၏အနေအထားကိုစွန့်ခွာ, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, bulunmaktayım.xnumxနှစ်ပေါင်းအတိတ်အမိန့်မှအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းထားပြီးငါတူရကီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသည့်နေရာအရပ်နှင့်အတူဤပုံမှန်အဖှဲ့အစညျးမှာအလုပျလုပျဖို့အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်စနစ်နှင့်လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လက်ရှိသက်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးန်ထမ်းနှင့်အတူ ပို. ပင်တိုးပွားလာ ...
အာကာသအမှတ်တံဆိပ် Erciyes ဖွစျလာ 03 / 04 / 2015 အာကာသမှ Erciyes အမှတ်တံဆိပ်သြစတြီးယားရဲ့နာမည်ကျော်နှင်းလျှောစီးပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ HEAD ဖွစျလာ, 2015-16 Erciyes ဆောင်းတွင်းရာသီထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်စကားအခြေစိုက်စခန်းရွေးယူကြ၏။ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်မြူနီစီပယ်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသိများနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအကြားနေရာမှယူစတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားနှင့်အတူတောင်များစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ, နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကိုကျေးဇူးတင်အရေးကြီးဆုံးလိပ်စာများ Erciyes ဆောင်းရာသီနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြောင်းစေပြီ။ ဤသည်မြင့်တက်လာသည့်ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလည်းယခု Erciyes ကနေကမ္ဘာကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်ကြသည်မှလစျြလြူရှုမတည်မနေနိုငျပါ။ အဆိုပါ 1950 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးဆုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် 2015-2016 ရာသီစေရန်သြစတြီးယားလညျးအရေးကွီး HEAD နှင်းလျှောစီးပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ၌တည် ...
သမ္မတ Recep Altepe: ဌာနေလမ်းရထား '' သူကအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ကမ္ဘာကျော်လမ်းရထားထက် silkworm အရည်အသွေးကိုဆိုပါတယ် 06 / 07 / 2012 ကျနော်တို့ 2,5 နှစ်ပေါင်းဒီအလုပ်လုပျနိုငျ '' အမှတ်တံဆိပ် Bursa မြို့တော်ဝန် Recep Altepe ထက်ကြောင်းပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးကိုရည်ညွှန်းပိုးပိုးရဲ့ကမ္ဘာကျော်လမ်းရထား, '' တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးဒေသဆိုင်ရာလမ်းရထား။ ကျနော်တို့ဆင်ခြေလျှော၏ပြောတတ်အချို့သောပေါ်လာတာဟာအရင်, လုပ်နေတာ။ ဆွစ်ဇာလန်အတွက်လမ်းရထားသောတောင်ပေါ်ကိုချွတ်။ ငါတို့သည်လည်း?, ဒီမှာဖြစ်ဖို့မရှိ၏ "he're စကားပြော," ဟု၎င်းကပြောသည်။ Bursa ဟီလ်တန်ဟိုတယ်မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe အတူတူလာမယ့် industrialists, လောကီသားမြို့သူမြို့သားပြိုင်ပွဲများတွင်မရှိတော့ဖြစ်ပါသည်, သူတူရကီအချိန်ဖြုန်းဖို့အချိန်ရှိကွောငျးမှတ်ချက်ချသည်။ Altepe, 'အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်အောင်မြင်မှုများစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းမျဉ်းတားကြောင်း Bursa ရဲ့အသစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်ရွယ်လူဦးရေ ...
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝယ်ယူခြင်း, Logitrans ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ထဲမှာတွေ့ကြံရ 'မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး' ' 20 / 11 / 2012 ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝယ်ယူခြင်း, Logitrans ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ '' နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်အတူတကွကမ္ဘာ၏ဘီလူးကြီး "Logitrans ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ" ဆောင်ခဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများကမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး; 15 - နိုဝင်ဘာလ 17 အကြားပါဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး 2012 14.000 လူများအစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ တွင် "Logitrans ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော" ကိုလက်ခံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစျေးကွက်အကြီးဆုံးလှုပ်ရှားမှု; စာနယ်ဇင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတို့ကဖုံးလွှမ်းဧည့်သည်များအဘို့အဖွဲ့စည်းကော့တေးဝယ်ယူ; Alışan - မိတ်ဖက်ဖြစ်မှု၏ INTERBULK ငါ၏အကြေငြာချက်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်း Logitrans ပို့ဆောင်ရေး၏အရေးအပါဆုံးအစည်းအဝေး၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည် ...
ကုန်တင် Wagon ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များနောက်ဆုံးရနည်းပညာအပေါ်ကိုရွေးချယ်ထားပါသည်
အာကာသအမှတ်တံဆိပ် Erciyes ဖွစျလာ
သမ္မတ Recep Altepe: ဌာနေလမ်းရထား '' သူကအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ကမ္ဘာကျော်လမ်းရထားထက် silkworm အရည်အသွေးကိုဆိုပါတယ်
မျက်စိအဆင်းလှသော InnoTrans အမျိုးသားအမှတ်တံဆိပ်မှာဖြည့်ခဲ့သည်
ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်အတူတူရကီအတွက်လယ်ထွန်စက် xnumx.el TürkTraktörအမှတ်တံဆိပ်